AKHRISO: LIXDA Ciyaartoy Ee Wareerka Ah Ee Borussia Dortmund Ay Kusoo Iibsatay Lacagtii Ay Barcelona Ka Siisay Ousmane Dembele & Baaqiga Ay Weli Haysato – Gool24.Net
AKHRISO: LIXDA Ciyaartoy Ee Wareerka Ah Ee Borussia Dortmund Ay Kusoo Iibsatay Lacagtii Ay Barcelona Ka Siisay Ousmane Dembele & Baaqiga Ay Weli Haysato
Borussia Dortmund ayaa si cajiib ah uga faa’iidaysatay lacagtii ay ku iibisay xiddigeedii hore ee Ousame Dembele oo xagaagii 2017 uga wareegay Barcelona oo waqtigaas raadinaysay ciyaaryahan u beddela Neymar Jr oo lacag badan ay kaga iibisay PSG.
Dortmund oo caan ku ah inay soo saarto ciyaaryahanno badan oo iyagoo da’yar ay iibsato, kaddibna ay ka dhigto xiddigo waaweyn oo marka dambe ay lacag badan ka faa’iiddo iibkooda, ayaa waxay sannadkan haysataa indhaha caalamka oo ku raaxaysanaya wacdaraha ay dhigayaan laacibiinta da’da yar ee ay ku urursatay Signal Iduna Park.
Kooxda reer Germany waxay Barcelona kaga iibisay Ousmane Dembele lacag dhan €145 milyan oo Euro, waxaanay kusoo beddelatay lix ciyaayahan oo hadda ay boqollaal milyan ka faa’iidayso.
Dembele kaddib, waxay fasaxday Pierre-Emerick Aubameyang iyo Christian Pulisic oo ay ka kala iibisay Arsenal iyo Chelsea ka kala iibisay. Waxa kale oo ay lacag ka samaysay labada laacib ee Abdou Diallo iyo Paco Alcacer.
Warbixintan waxa aanu idiinku soo bandhigaynaa lixdii ciyaartoy ee Borussia Dortmund ay u kharash-garaysay lacagtii ay Barcelona kaga iibisay Dembele oo ay waliba wax uga soo hadheen.
Qaabka xigmadda leh ee ay kooxdani u maamushay lacagtaas oo tusaale u ah kooxo waaweyn, waxay soo qaadatay xiddigo jaban oo haddana ciyaartooda ay marka horeba muuqatay in aanay waqti badan ku qaadanaynin inay xiddigo waaweyn noqdaan, taas oo ay tahay siyaad mudan in kooxaha kale ee Yurub ay kaga daydaan.
Xagaagii 2017 ayay Borussia Dortmund ku dhawaaqday saxeexa Jadon Sancho oo ay Manchester City kaga iibsatay €8.7 milyan kaliya, waxaana uu markiiba si fiican u buuxiyey booskii gudaha garoonka ee uu banneeyey Ousmane Dembele.
Illaa waqtigaas, waxa uu da’yarka reer England dhaliyey 27 gool iyo 33 kale oo uu caawiyey, halka marka la barbar-dhigo Dembele uu tan iyo muddadaas Barcelona u dhaliyey 12 gool 12 kalena caawiyey.
Hadda, waxa qiimaha Sancho uu kor u dhaafayaa €100 milyan oo waliba lala baryayo.